Miisaaniyadda dhaqaale ee dalka oo la akhrin doono khamiista | Star FM
Home Wararka Kenya Miisaaniyadda dhaqaale ee dalka oo la akhrin doono khamiista
Miisaaniyadda dhaqaale ee dalka oo la akhrin doono khamiista
Wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta howlaha qaranka Mr. Ukur Yatani ayaa la filayaa inuu maalinka khamiista ee toddobaadkan baarlamaanka ka hor akhriyo qiyaasta miisaaniyad sanadeedka dowladda.
Waxaa uu qorshuhu yahay inuu soo bandhigo miisaaniyad dhaqaale oo dhan 3.6 tiriliyoon oo shilin si dowladda ay u adeegsato sanadkan iyo 6-da bilood ee ugu horreysa sanadka 2022-ka.
Sanadkii hore miisaaniyadda dhaqaale ee dalka ayaa ahayd 2.91 tiriloyoon oo shilin halka sanadkii ka soo horeeyay ay noqotay 1.83 tiriloyoon.
Waxaa la filayaa in maamulka talada haya ee Jubilee uu sanadkan dhaqaale badan u qoondeeyo wasaaradda caafimaadka si loola tacaalo cudurka COVID19.
Tani ayaa imaanaysa iyada oo gudaha wadanka laga dareemaya saameynta cudurka uu ku yeeshay wax soo saarka.
Previous articleShacab ku dhaawacmay Duqaymo ka dhacay Gedo oo Muqdisho la gaarsiiyay
Next articleDHAGEYSO:Safiirka Kenya ee Botswana oo ka hadlay dhibaatooyinka ka jiro Garissa